Iran: Midera An’i Ahmadinejad Ny Tononkalon’ny Bilaogera Islamista · Global Voices teny Malagasy
Iran: Midera An'i Ahmadinejad Ny Tononkalon'ny Bilaogera Islamista
Voadika ny 15 Jona 2017 16:51 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Português, English
(Marihina fa tamin'ny 21 Aprily 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Raha maro ny bilaogera Iraniana no nitsikera ny kabarin'ny Filoha Mahmoud Ahmadinejad tao amin'ny fihaonamben'ny Firenena Mikambana mikasika ny fanavakavaham-bolokoditra tao Geneve omaly dia nidera ny zava-bitany kosa ny bilaogera Islamista sasany .
Nilaza [fa] i Hamed Talebi, tao amin'ny bilaoginy Khabarnegar Mosalman ( “Mpitati-baovao Miozolomana”) fa “manoratra tononkalo ho fanohanana an'i Ahmadinejad ny mpanakanto namantsika mahafinaritra. Nosoratana ny tononkalo mahafinaritra vitsivitsy nandritra ny kabary revolisionera sy manohana ny rariny nataon'i Ahmadinejad tao amin'ny fihaonambe tao Durban ary tokony hanampy amin'ny fandefasana izany amin'ny alalan'ny SMS ny namana…. ” Ireto ny roa tamin'ireo andininy tamin'izany:
Fantatrao ve ny dikan'ny mandao ny fihaonambe ? Mandositra ny lojika ny fahavalo
Mirehareha amin'ilay lehilahy be herimpo i Iran. Manafika ny fahavalo amin'ny alàlan'i Ahmadi [izany hoe Ahmadinejad] izy
Nilaza [fa] i Madreseh Ma ( “Ny Sekolintsika”) fa lasa fihaonamben'i Ahmadinejad ny fihaonambe tao Durban . “Tsy voafafa ao anatin'ny fahatsiarovana ny tantara ny nataon'i Ahmadinejad. Matahotra an'i Iran mandray anjara amin'ny fihaonambe mikasika ny fanavakavaham-bolonkoditra rehetra ny Tandrefana ankehitriny . “
Nanoratra [fa] i Paberhnegan ( “Vahoaka tsy Mikiraro”) fa nahafaly ny vahoaka Iraniana ny zava-bitan'i Ahmadinejad tany Genève. “Tsy nila nanao dokambarotra ho amin'ny fampielezan-kevitry ny fifidianany izy. Ny dokambarotra tsara indrindra no efa nataony. “